တႈအိဥမူလ႕တႈတီတႈလိၚဒီး တႈမုဏတႈခုဥအပူၚ.(၉.၁၂.၂၀၂၀) | Radio Veritas Asia
youth Activating at St. Joseph Catholic Major Seminary
ဒီပုႈ၀ဲႈပွၚဒိကနဥတႈဖိသ့ဥဧ႕..ခဲအံၚတဘ်ီပကနဥဟူဘဥတႈအိဥမူလ႕တႈတီတႈလိၚဒီးတႈမုဏတႈခုဥအပူၚ မ့ႈ၀ဲဒဥ..ပွၚသးစႈသ့ဥတဖဥတူႈခီဥဘဥ၀ဲဒဥတႈမၚအ႕မၚသီအဂ့ႈန ့ဥလီၚ. ခ့ခါခဲအံၚ ပွၚသူဥဘီဥသးစႈတဖႈ ထံဥဘဥ လဲၚခီဖ်ိဘဥ၀ဲဒဥ..တႈမၚအ႕မၚသီဘဥတႈလ႕ အတႈအိဥမူပူၚန ့ဥ အိဥ၀ဲဒဥ အါဂၚန ့ဥလီၚ.
ပွၚသူဥဘီသးစႈ တနီၚနီၚ မတႈမၚအ႕မၚသီ အိဥ၀ဲ အသိး ပွၚသူဥဘီဥသးစႈတနီၚနီၚ အဘဥတႈမၚတရီတပါ..တႈမၚအ႕မၚသီ အိဥ၀ဲဒဥ န ့ဥ ပထံဥဘဥန ့ဥလီၚ. ပနီႈကစႈ မ့ႈဂ့ၚ ပတံၚပသကိး မ့ႈဂ့ၚ ပွၚကညီ အစၚဒီးအါဂၚသ့ဥတဖဥ န ့ဥ ထံဥဘဥလဲၚခီဖ်ိ ဘဥ၀ဲ..တႈမၚအ႕မၚသီ တႈတတီတလိၚ လ႕ အတႈအိဥမူပူၚ အိဥ၀ဲဒဥ န ့ဥလီၚ. တႈလ႕တႈမၚအ႕ မၚသီတႈန ့ဥ တမ့ႈဒဥထဲ တႈမၚအ႕မၚသီ ၊တႈမၚသံမၚ၀ီ ပွၚကညီတဂၚဂၚန ့ဥဘဥ .တႈမၚကိႈမၚနးပွၚ ..တႈမၚဖွီဥမၚနးပွၚ..တႈမၚတႈတတီတလိၚလ႕ ပွၚဂၚအဖီခိဥ..တႈမၚဟးဂီၚပွၚတဂၚဂၚအသူးအသ့ဥ ..တႈထီဒါတႈအဲဥတႈကြံ..တႈတီတႈလိၚလ႕ ပွၚတဂၚဂၚအဖီခိဥ တႈတပဏဒိဥပဏကဲပွၚတဖဥ သနဏက့..မ့ႈ၀ဲဒဥ တႈမၚအ႕မၚသီတႈ န ့ဥလီၚ.
လ႕တႈန ့ဥအဃိ..ဖိသဥတနီၚနီၚ..အသူဥအသးဟးဂီၚ ဒီး တနီၚနီၚမၚသံလီၚဘဥအသး..တနီၚနီၚ အတႈအိဥမူဟါမဥ..ဘဥဖံးအီဥမၚအီဥတႈလ႕ မဲဏထံမဲဏနိ..တနီၚနီၚအတႈဖံးတႈမၚတအိဥ ဒီးဟူဥတႈဘ်ဥတႈ..တနီၚနီၚဘဥပ်ံၚဘဥဖုးတႈလ႕ အတႈမၚကစႈအဖီခိဥ..ဒီး ပွၚလ႕အမ႕ဆူဥအီဥတဖဥအဖီခိဥ န ့ဥလီၚ။တႈကဲထီဥအသးဒ္အံၚန ့ဥ ဘဥမနူၚအဃိလဲဥ...မ့ႈဒဥတႈပဏဒိဥဖိသဥ..သူဥဘီသးစႈသ့ဥတဖဥ.အခြဲးအဎးတအိဥ၀ဲဒဥအဃိန ့ဥလီၚ.
တႈပဏဒိဥပဏကဲ ဖိသဥသူဥဘီဥသးစႈတဖဥအခြဲးအဎး စၚ အဃိ..ဖိသဥသူဥဘီဥသးစႈတဖဥ ထံဥကမဥတႈ၊ မၚကမၚတႈ ၊လဲဒဥထဲအတႈထံဥ..လူၚဒဥထဲအသး မၚဒဥထဲအသူဥအသးအိဥ၀ဲအသိး ဒီးဖိသဥသ့ဥတဖဥ ကဲထီဥပွၚဟးဂီၚဖိန ့ဥလီၚ..တႈအံးမ့ႈ၀ဲဒဥ တႈမၚအ႕သီထီဥပွၚသူဥဘီဥသးစႈ..တႈမၚအ႕သီသးစႈတဖဥ